Tenga Testosterone Enanthate powder muBurk | AASraw
AASraw inogadzira NMN neNRC powders muhuwandu!
/Blog/Testosterone Enanthate/Tenga Testosterone Enanthate powder muBurk
Posted on 01 / 27 / 2018 by 阿斯劳 akanyora Testosterone Enanthate.
Chii chinonzi Testosterone Enanthate?
Testosterone Enanthate ndeimwe ye testosterones inonyanya kushandiswa pakurapa testosterone yakaderera. Inonyanya kuonekwawo mukushanda kusimbisa denderedzwa. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinotengesa vanabolic steroid pamusika, zvinonyanya kushandiswa, zvakanyatsorasikirwa nevakawanda vese varume vakuru uye kugoverwa kwayo kune denga.
Testosterone Enanthate is steroid anabolic iyo yakazara kumativi ose ekushandiswa. Iyi ndiyo yakakwana yavanabolic steroid kwekutanga kokutanga steroid user uye ichave yakakosha zvakafanana kune munhu ane nguva yakawanda muchechi. Ichakutakura pamwe chete nayo inogona kugadziriswa nemigumisiro asi isu tichawana zvakare kuti iri nyore kwazvo kutonga. Kana izvi zvichishamisa hazvifanirwe. Pashure pezvose, kunyange chigadzirwa ichi chiri testosterone chete, hormone muviri wemunhu haisi wekujairika chete asi unokosha kune utano hwedu uye hutano.
Chii Testosterone Enanthate powder?
Zita: Testosterone Enanthate
Molecular Kurema: 400.59
Kunyorera Melt: 34-39 ℃
Kuchengetedza Temp: 2-8 ℃
Ruvara: White crystalline powder
Testosterone Enanthate Cycles uye Uses
Testosterone Enanthate mitsara inowanzowanzove yekuderedza kana kuunganidza muviri, kunyange iyo inogona kushandiswa nenzira yakananga mukucheka kana kurasikirwa kwemaitiro. Kuwanda kwekuwana kana kuputika, Testosterone Enanthate inowanzoshandiswa muyero yakakwirira (kazhinji inenge iri zvishoma ye500mg nevhiki), uye nokuti iyo steroid anabolic ine ester yakareba yakasimbiswa nayo, icharatidza hafu yeupenyu hwemativi ose 7 - 10 mazuva, saka saka Testosterone Enanthate maitiro anowanzomhanyira kwenguva yeZvondo 10 - 12 kana nguva refu.
Mune maitiro maviri ekuderedza uye kucheka, Testosterone Enanthate inowanzoiswa pamwe nemamwe mapurisa ehupenyu huchaita kuti mugumo wemugumo upiwe (kukuvadza, kukura, kana kurasikirwa kwemafuta). Semuenzaniso, Testosterone Enanthate miitiro yechinangwa chekudzungira muviri inowanzobatanidza kushandiswa kweDeca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) uye / kana Dianabol (Methandrostenolone), apo Dianabol anowanzotanga kusvika kwemavhiki ekutanga e6 sechikwata chekutanga.
Kana chiitiko chekuti Testosterone Enanthate maitiro anenge achicheka kana kuti kurasikirwa kwemazana, Testosterone Enanthate inowanzosvika kuTTT (Testosterone Replacement Therapy) inoshandiswa zvikuru yeAIDS XMUMXmg nevhiki apo mamwe maitiro akawanda anonyanya kunaka ekucheka uye kurasikirwa kwemafuta anosimbiswa panguva . Kushandiswa kweTesttosterone Enanthate pamutengo uyu kungochengetedza basa romuviri rinowanzo panzvimbo pane kusimbisa kufambira mberi nekusimudzira kushanda.
Muyero we mbesa Testosterone Enanthate powder:
Kuchengeta testosterone yakaderera, chirwere chetestrosterone Enanthate chichatowa mu 100-200mg zuva rose re 7-10. Zvisinei, vamwe vanachiremba vachaparadzanisa kuwandisa kwese uye kuitora iyo mazuva ose mashanu. Zvisinganyanyozivikanwa muUnited States vamwe vanachiremba vacharayira doses re 200-400mg masvondo ose e2-3 uye mune dzimwe nguva masvondo ose e4. Izvi zvakanyanya zvisina kukwana asi chiito chinotevera. Nguva yose yekurapa ichave isina kusingagumi. Varume vakawanda vanoda chirwere chepasi che testosterone vachachida muupenyu. Izvi zvingaita sezvinoshungurudza asi zvibvunze mubvunzo unokosha; Ungada here kutambudzwa kubva pasi pasi testosterone kana kuitora?
Muchigadziriro chekusimudzira kushanda, zvinowanzoonekwa zve Testosterone Enanthate doses zvichawa mu 200-500mg kwevhiki. 200-250mg kwevhiki yakawanda zvikuru kana iyo hormone inongoshandiswa kurwisana nehutachiona hwekupera testosterone inokonzerwa nokushandiswa kwevana vanabolic steroid. Nokuda kwechokwadi vanabolic effect, vazhinji varume vachawana 400-500mg kwevhiki kuti ive yakabudirira zvikuru uye iri nyore kwazvo kutonga. Maitiro akadaro anowanzoparadzana kuita mairi maviri akaenzana kwevhiki kwevhiki rose re dosing. Disi inogona kuenda kumusoro kupfuura 500mg kwevhiki; zvisinei, varume vazhinji vachawana huwandu hwe500mg kuti vave zvose zvavanoda. Kana vakawanda vachidikanwa, varume vakawanda vachawana 600-1,000mg vhiki imwe neimwe inogona kubvumirwa uye inodzorwa asi maitiro anosvika ku1,000mg mark achawedzera zvikuru mikana yemigumisiro yakaipa. Koti testosterone yakawanda sei munhu anogona kubvumira uye kutonga ichasiyana kubva kumunhu mumwe kuenda kune inotevera. Zvisinei, varume vazhinji vachawana doses kupfuura 1,000mg kwevhiki rose asi kuvimbisa madhara kune imwe nzvimbo.
Pasinei nechinangwa chako chekushandisa, Testosterone Enanthate inonyanya kunyanya nezvose vanabolic steroid. Pane, zvisinei, pasina chikonzero chekuisa pane imwe testosterone. Izvi zvingava zvisina maturo mumatambudziko akawanda. Sarudza zvimwe steroid zvinosangana nechinangwa chinoshandiswa chekushandiswa zvakanyanya.
Testosterone Enanthate is an anabolic steroid very simple, asi ihwowo ndeimwe yevana analiclic steroids nguva dzose. Izvo zvine simba zvikuru uye inotakura hurefu hwakanyanya hwekushivirira pakati pevarume vakuru vakawanda. Sechiremba anorapa, kushandiswa kwe Testosterone Enanthate kunogona kuchinja hupenyu hwako. Izvo zvinopfuura zvingaita kuti murume wemakore apakati ave nemanzwiro ake kuti anzwe sokuti ari mumakore makumi maviri zvakare. Haasi kungoita chete kushingaira kwake uye kushingairira hupenyu hudzoka, iye achava noutano hwakakwana.
Mune simba rekuita, nepo vazhinji vachaisa mamwe vanabolic steroid ne Testosterone Enanthate yavo inogona kushandiswa yoga. Iyi ndiyo nheyo inonzi foundational anabolic steroid iyo inogona kukurudzira kuchinja kukuru muhupenyu hwose pachako. Kunyange zvazvo zvichitora supraphysiological doses kuwana chokwadi chechokwadi uye chinoshamisa, chivimbo chikonzero chemigumisiro yakaipa chinoramba chakakwirira kwazvo. Izvo zvakakosha, nepo inonyatsobudirira mutengo we steroid iyi inopfuura kutengesa kuipa kunyange kukurudzira kudarika yakatove nayo. Pasinei nehuwandu hwehutano hwako haugoni kuenderera mberi ne Testosterone Enanthate.
Kupi Tenga Testosterone Enanthate powder online?
Iwe unogona kuwana vazhinji Trenbolone Acetate inowanzo inowanikwa paIndaneti, asi zvakaoma kutenga Genuine Trenbolone Acetate powder online. Pane zvakawanda zvinotengesa kutengesa zvigadzirwa pamusika. saka kana iwe ukatenga Trenbolone Acetate powder online, unofanira kusarudza realable source.
zvakanakira Tenga Testosterone Enanthate powder kubva paAASRAW:
1. Best quality steroids yakagadzirwa nechepasi fekitari yemari
Isu tinovimbisa kuchena kwepamusoro kweese hupfu> 98%, uye nekuti tisu mutengesi kwete mutengesi, zvinhu zvese pano zvinotengeswa zvakanangana nemutengo wakaderera.
2. Kutsanya uye kuchengeteka kutora steroid zvigadzirwa
1) Chikamu chinogona kutumirwa kunze kwemaawa 24 mushure mekubhadhara, uye kupa nhamba yekutevera.
2) Mutengesi ane ruzivo ane ruzivo anochengetedza kuchengetedzwa kwakachengeteka uye kwakangwara kwezvose steroid zvigadzirwa. Nzira dzakasiyana-siyana dzokufambisa, uye sarudzo yakanakisisa maererano nekamuri yako pachako.
3) Nhamba yepamusoro yakawanda yehutano hwakachengeteka inopfuura 95%.
4) Nguva yekutora steroids powder: 3-5 mazuva ekushanda kuU.SA, uye 4-6 mazuva ekushanda kunyika dzeEU.
3. Tine vashandi munyika yose
1) Unyanzvi hwehutano uye ruzivo rwakawanda hunoita kuti vatengi vanzwe vakasununguka, zvigadzirwa zvakakwana zvemarudzi ose e-steroid nezvinhu uye nekukurumidza kutakura zvinosangana nechido chavo.
2) Mhinduro yemushandi inozokosheswa, mazano ako achatisimbisa kuti tivandudze sevhisi yedu, uye ibasa redu kusangana nezvose zvinodiwa nevatengi.
3) AASraw ndomumwe wevatengesi vakavimbika zvikuru veSteroid zvigadzirwa zvine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuchengetedzeka & nekukurumidza kutumira nebasa rakanaka.
Tags: testosterone enanthate powder
The Definitive Guide kwa Testosterone propionate powder kubva	Tenga Methenolone Enanthate powder: usazvitenga usati waziva izvi !!!